बाख्रा चह्राउन आएकी गाउले केटी - Nepali Sex Tube
त्यो दिन बिहानै देखि अति नै केटीको तलतल लागिरहेको थियो। छोल्न छोडेको पनि महिनौ भइसकेको थियो। चिक्ने मन साह्रै बढेकाले केटी जता भेटेपनि चिकिहालम जस्तो भएको थियो। बाइक लिएर माथी माथीका गाउँतिर लागे।
दशै भर्खर सकिएको थियो। बाटो नयाँ, बाटोको पिच नयाँ, यति धेरै माथी कहिल्यै आएको थिइन। जंगलको लामो उकालो बाटोको बिच बिचमा कतै कतै घरहरु आउँथ्यो। भैँसीबाख्रा चराउन आएका गाँउका बुढापाका बाटोको साइडमा बसेर वस्तुभाउ धपाइरहेका थिए। झण्डै १ घन्टा उक्लिसकेको थिए, बाख्राले बाटो छेकेपछि झ्याप्प ब्रेक लगाए। बाख्रालाई साइड लगाउन एउटी केटी हतार हतार आइ।
‘झन्डै हानेको मैले।’, मैले बाइक रोकेर भने।
‘घाँस खान जानु नि, बाटोको बिच बिचमा किन कुँदेका हुन।’, बाख्रा धपाउँदै भनी।
‘तिमीले बोलेको बुझेपो बाख्राले।’, मैले भने।
मुस्काउँदै मतिर हेरी।
गोलो, गोरी अनुहार परेकी, ठूला ठूला आँखामा साह्रै आकर्षक थिइ। अनुहारमा कुनै मेकअप थिएन। हातका नङ फोहर थिए। हरियो रंगको टिसर्ट मैलो भइसकेको थियो। सुरुवाल घुँडासम्म दोबाेरकी थिइ, चिल्ला तिघ्रा सलर्क्क परेका अनि धुलै धुलो भएको थियो। जंगलको बिचमा भेटिएकी त्यो केटी प्रति साह्रै कामबासना बढेेर आयो। एकान्तमा भेटिएको पनि होली।
मैले स्टार्ट बन्द गरे अनि बाइकमै बसेर सोधे, ‘बाघ आउँदैन यस्तो जंगलको बिचमा बाख्रा लान?’,
‘किन नआउनु। लान्छ नि। अहिले दिउँसै चाँही आउँदैन।’, बाख्रालाई भित्ताको घाँसतिर लगाएर उ छेउको ढुङ्गामा बसी।
‘अनि घरतिर चह्राउने ठाउँ छैन र?’, मैले सोधे।
भि-नेक टिसर्ट भित्र देखिएको स्तनको क्लिभेज नियाल्दै थिए, उसले भनि, ‘यही तल त हो घर, १० मिनेट पनि लाग्दैन।’
‘ए! अनि स्कुल छैन तिम्रो अहिले?’, मैले सोधे।
सजिलोसंग ढूङ्गामा बस्न उसले तिघ्रा फट्टाइ। मुटुको ढूकढूकी बढ्दै थियो। यतिका बेलासम्म पनि त्यो बाटोबाट अरु कुनै गाडीहरु कुदेका थिएनन्। परपरको सानो सानो आवाज सुन्न मेरो कान ठाडो भएको थियो। अनि कट्टु भित्र अर्को पनि ठाडो हुन थालेको थियो। मैले हेल्मेट फुकालेर ऐनामा राखे।
‘अब तिहार पछि मात्र हुन्छ क्यारे। कोरोनाले गर्दा खुलेपो त्यो पनि।’
‘हो त है। कहाँ छ यहाँ स्कुल तिम्रो?’
‘लाग्छ आँधी घन्टा घरबाट।’, अनुहार छोप्न आएको कपाल पछाडी लगेर बाँध्दै उसले भनी।
‘कतिमा पढ्छौ तिमी?’
‘गज्जब!’, मैले भने।
उ मुसुक्क हाँसी। उसको शरीर हेर्दा भने उ नौ कक्षा पढ्ने जस्तो लाग्दैनथी। गाउँघरमा मेलापात गर्दा पढ्ने फुसर्त पनि नहुँदो होला। उसको उमेर त्यस्तै १७-१८ वर्ष लाग्थ्यो।
‘नाम के हो नि तिम्रो?’
‘नाम पनि तिमी जस्तै राम्रो रहेछ।’, मैले मुस्काए भने। उ मसक्क भइ।
शहरका केटी त बाइक र कार चढ्ने केटाको पछि लाग्छन् भने गाउँकी केटीलाइ झन् के नछोला र? उसलाई यो नौलो अनुभन हुँदो हो कि कुनै केटा बाइक रोकेर गफिदै छ, अनि तारिफ गर्दै छ। बढो चासो दिएर जवाफ दिदै थिए। सायद गोठालो आउँदाको एकान्तपनामा बोल्ने साथी पाएकोले पो हो कि?
‘तपाइ पनि बोल्न त खुब जान्नु भ’को रैछ। कहाँबाट आउनु भयो?’, उसले सोधी।
‘यही तलबाट हो, यो बाटो कहाँसम्म जान्छ भनेर डुल्न आएको।’
‘ए, जान्छ नि निकै माथी सम्म, रमाइलो छ माथी माथीको डाँडाहरु।’
‘हो र। मलाइ त तिमीसंगै गफ गर्न पो मज्जा लाग्यो त।’, मैले फेरी अर्को तारिफ दिए।
‘तपाइ पनि केटी जिस्काउन त खप्पिस हुनुहुँदो रै’छ है।’, उसले प्याच्चै भनी। केटी मैले सोचेजस्तो साह्रै सोझी होइन रहेछी। केटीको मनोदशा बुझ्दिरैछे।
‘जिस्काउन मात्र होइन नि मन्दिरा अरु अरु गर्न पनि खप्पिस नै छु म’, सोझै दिए।
‘तपाइ त राम्रो मान्छेपो ठानेको मैले। नचाहिदो कुरा पो गर्न थाल्नु भयो।’, उ जुरुक्क उठी। अनि बाख्रा धपाएर तल तिर ओर्लिन थाली।
मैले बाइक फर्काएर कुनामा राखे। अनि उसको पछि पछि लागे।
‘कस्तो रिसाएर हिडेकी त नि एक्कासी।’ मैले सोधे।
उसले कर्के आँखाले मतिर झनै रिसाएर हेरी। मेरो मुटु झन् झन् धड्किन थाल्यो।
‘बोल न ए मन्दिरा।’, मैले कुहिनाले उसलाई धक्का दिदै भने।
उ टक्क अडिइ। अनुहार रातो बनाएर रिसाएर बोली, ‘के हो, लाज लाग्दैन, दिनदहाडै अर्को छोरीचेलीलाई छुन!’
‘ए मन्दिरा, छुने नै अर्काको छोरीचेलीलाई त हो। खै-खै छुम तिम्रा बुबुहरु।’, उसको स्तन च्याप्पै समाते। टाइट, साह्रै मिलेको स्तन, भित्र
जोडले उसले मेरो हातमा हिर्काइ।
‘कस्तो हो के तिमी?’
‘छुने हैन है।’
‘के गर्ने त? चिक्ने? ल गरम न आउ।’, मैले उसको हात तान्दै आफुतिर ताने।
‘कस्तो मति बिग्रेको केटा रै’छ!, छोड् मलाइ।’, उसले जोडले हात झट्कारी। अनि उ हतार हतार बाख्रा धपाउँदै ओरालो लाग्न थाली। म उसको पछीपछि लागे।
‘के भो त मति बिग्रेर, लौ आउ गरम, धेरै बेर लाग्दैन के।’, कम्मरबाट हात छिराएर उसका अगाडीका स्तन मेरो समातेर माडे। उ फेरी जोडले शरीर हुत्याएर अगाडी बढी। मैले फेरी उसलाई पछाडीबाट समातेर जोडले अंगालोमा कसे। मेरो ठन्किएर लाडोले उसको पुठोमा दबाब दियो। दाहिने हात सुरुबालको अगाडीबाट छिराएर पेन्टी भित्र छिराए। न्यानो अनि रौंको गन्जागोलमा मेरो औलाहरु अल्झिए।
‘छोड् भनेको, छोड्, उसले कुहिनाले पछाडी हिर्काए। मेरो पेटमा लाग्यो। दुख्यो पनि।
अनि त दुवै हात च्याप्प समातेर पछाडी ल्याए। गलबन्दी लगाएको थिए, त्यही फुकालेर हात कसेर बाँधिदिए।
अनि बाटोको साइडको झाडीतिर लगे। मुख च्याप्प समातेर उसलाई अगाडी लगाए। बाक्लो झाडीको सानो सम्म परेको चउर भेट्दासम्म समातेर लगिरहे। उसले लात्तो हान्न प्रयास गरिरही।
‘छोड् छोड्, छोड् मलाई!!’, उसको मुख छोड्नासाथ उ चिच्चाइ। खल्तीबाट रुमाल निकालेर मुख भित्र रुमाल कसिने गरी पछाडी ल्याएर गाँठो पारे। उ बोलिरही तर आवाज सुनिन्थेन।
उसको हात खोलिदिए अनि अगाडी ल्याएर बाँधे। अनि चउरमा उत्तानो लडाए। बाँधेको हातबाट टिसर्ट निकाल्न मिलेन त्यसैले टिसर्ट माथी ताने, भित्रको समिज पनि माथी सारेर पुक्क उठेका स्तन नाङ्गो बनाए। सुरुवालको इजार झोलेर तल झारे। सेता शरीरमा त्यो कालो पेन्टी साह्रो कामुक देखिएको थियो। हेर्दै असह्य भएर आउने। पेन्टी पनि खोलेर निकालिदिए पछि उ करिब करिब नाङ्गो भइ।
उसले लात्तो चलाइ। हात बाधेकाले जुरुक्क उठ्न सम्भव थिएन। उसको शरीरमा पसिनाको गन्ध थियो। जुन साह्रै मनमोहक अनि उत्तेजक बासना थियो। म उसको नाङ्गो शरीरमाथी घोप्टे परेर स्तनको मुन्टा चुस्न थाले। पसिनाले मुन्टाहरु नुनिलो भएको थियो। अनि चुस्न थालेपछि उसले लात्तो हान्न बन्द गरी। मेरो ठन्किएको लाडोले उसको तिघ्रामा दिएको दबाब सायद उसले महसुस गरेकी थिइ। केही बेर चुसेपछि उसका मुन्टाहरु ठन्किन थाले।
‘तिमीलाई म जसरी नि चिकेरै छोड्छु, बरु सजिलैसंग गरम, नत्र मान्दैनौ भने झन् तिमीलाई नै गाह्रो हुने हो।’,मैले भने।
अनुहार रातो भएको थियो। केही बोलिन। मैले मुखको रुमाल फुकादिए।
‘हात पनि!’, उसले भनी।
‘हात एक छिनमा खोल्दिन्छु। पहिले मैले भनेको मान अनि। उसको मैलो घाँटी हुँदै ओठसम्म चुम्दै गए। उसले नचली सुतिरही। अनि ओठ चुस्न थाले। त्यसपछी जिब्रो भित्र हाले। उसको जिब्रो चुस्न थाले। केही बेरमा उ पनि उत्तेजित हुँदै गइ। अनि मेरो जिब्रो पनि चुस्न थाली। मैेले मेरो ट्राउजर र पेन्टी खोलेर साइडमा राखे। अनि हात खोलिदिए। केही प्रतिकार गरिन।
अनि उसलाइ उठाए, म उभिएर उनको मुखमा लाडो कोचे। उसले सायद यो सोचेको थिइन, किनकी उ झस्की। तर मेलै ठेल्न सुरु गरीसकेको थिए। उसको घाँटी भित्र सम्म अचेट्दा उ फत्र्याफत्र्या पर्थी। १० मिनेट मुखक्रिडा गर्दा उ पुरै थाकेको जस्तो देखिएकी थिइ। उसलाई फेरी उत्तानो सुताएर पुति भित्र लाडो हुले। “ऐया!’, उ पटक पटक चिच्याइ। उसका भर्जिन पुति तोड्दै मेरो घोडाको जत्रो लाडो भित्र छिर्दा उ मुर्छा पर्ने गरी कराउँथी। उ बढी कराएकाले मैले मेरो पेन्टी उसको मुखमा कोचिदिए। अनि मस्त चिकिरहे। म मच्चिदाँ उसका स्तन थल-थल हल्लिन्थे। अनि प्याट प्याट पिट्दा रातो हुन्थे। उ चिच्चाउँथी तर पेन्टी कोचिएको मुखबाट मुस्किलले आवाज आउँथ्यो। अति सार हुँदा उ पेन्टी मुखबाट निकाल्थी। अनि म फेरी कोचिदिन्थे। झन्डै आँधी घन्टासम्म चिकेर उठे। उसको पुतिमा फुसी भन्दा रगत बढी थियो। मुखबाट पेन्टी निकालेर लाडो हुलेर सबै फुसी हुलुलु कोचिदिए पछि बल्ल प्यास शान्त भयो। क्यामेरा निकालेर उसको नाङ्गो उत्तानो शरीरको फोटो खिचे। उसको अनुहार बिसर्नु थिएन। मैले लुगा लगाए। उ बिस्तारै उठी अनि लुगा लगाइ। बलै उभिइ। अनि बिस्तारै हिडेर माथी उक्ली। म उसको पछि पछि लागे। बाख्रा कतै थिएनन्। सायद घर पुगिसके होलान। मैले बाइक स्टार्ट गरे। उ बिस्तारै हिडेर तल पुगिसकेकी थिइ। उसको अगाडी गएर रोके, ‘बस, म पुर्याइदिन्छु।’
उ वास्तै नगरी हिडिरही।
‘बस भनेको, फेरी अर्को चाहिएको हो र?’, मैले धम्की दिए। उ रोकिइ। अनि बाइकको पछाडी एउटै साइडमा खुट्टा राखेर बसी। म बिस्तारै तल झरे। केही बेर गुडेपछि जंगल सकियो। बाटोमाथी घर देखियो। उ बोली, ‘यही हो।’ मैले बाइक रोके। बाख्राहरु त्यही माथीको गह्रामा चरिरहेका थिए। उ ओर्ली अनि बिस्तारै घर तिर लागि।
शिक्षिका दिदीको यौन इच्छा